Indoda yoMhlaza: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yoMhlaza: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
Umhlaza luphawu olulawulwa yiNyanga. Ungenisile, uyathandabuza kwaye uyacamngca, indoda e-Cancer igcina izinto kuye. Kuthatha iintlanganiso ezimbalwa ngaphambi kokuba umazi lo mntu.
Awunakunyanzela izinto ngomhlaza, uya kuzifihla kwakamsinya nje ukuba izinto ziqale ukuba zininzi kuye. Kuya kufuneka ube nomonde kuye ukuze avule ngokwakhe.
Umhlaza awusoze usebenzise ubukrakra bakhe kwenye into ngaphandle kokuzikhusela. Xa esongelwa, uyarhoxa. Lumka ungalimazi iimvakalelo zakhe njengoko enovakalelo.
Ukuba ufumanisa ukuba umntu onomhlaza uyababa okanye uyabanda, khumbula ukuba bubuso abubekayo kwabanye ukuba babubone. Ukuba uyakwazi ukuzidiliza iindonga zakhe, unemfesane, ufudumele kwaye unothando.
Ndifunde ukuba isibindi yayingekuko ukungabikho koloyiko, kodwa uloyiso phezu kwako. Indoda ekhaliphileyo ayisiyiyo ingoyikiyo, kodwa nguwoyisayo olo loyiko.
UNelson Mandela - Umhlaza odumileyo
Indoda yeCancer yindoda enobunene kwaye ihlonipha wonke umntu. Abantu bazakuthi uhlala enembeko. Uninzi lwabantu abanomhlaza lujolise kusapho.
Ngokufihlakeleyo unqwenela ukuba nabantwana abaninzi, kodwa uyazi ukuba ayisiyonto ilula le kwaye kufuneka azive ekhuselekile phambi kokuba aqale olu hambo. Uziva ekhuselekile xa esekhaya.
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 10
Njengoko enomdla omkhulu, indoda yomhlaza iya kuqikelela ukuba ungaziva njani okanye ucinga ntoni. Omnye wamadoda adumileyo omhlaza nguTom Cruise. U-Elon Musk, uRichard Branson okanye uSundar Photosi nabo bangamaCancer, okwenza lo mqondiso ube noxinaniso oluphezulu loosomashishini kunye nabaqambi.
Ukunyamezela ukuziva kwakhe
Kumntu onomhlaza, uthando yinto ekufuneka ifunyenwe. Kunzima kuye ukuba athande, nangona. Akabathembi abantu kwaye uhlala eneentloni. Uhlala ezikhusele kwiimvakalelo kwaye kungoko bambalwa abantu abanomhlaza ukuba bakholelwe kuthando xa uqala ukulibona.
Kungathatha ixesha ukuba indoda ekhethiweyo yomhlaza ifumane uthando lobomi bayo. Kodwa kamsinya nje akuba eyifumene, uya kuba ngoyena mntu uthandana noMhlaba.
Uya kuzama ukuza kumlingane wakhe ngezona zipho zibiza kakhulu kwaye uya kubakho ukwenza nantoni na ngaphandle kokucelwa. Indoda yomhlaza inokuba liqabane eligqibeleleyo le-zodiac kuba inyanisekile kwaye inomdla.
Ukuba akunjalo, uya kwenzakala aze abaleke. Uhlala ethembekile kwaye ulindele into efanayo kwiqabane lakhe. Akasoze akunyamezele ukungathembeki kwaye wayeza kushiya kwangoko xa kunokwenzeka into enje.
yintoni uZodiac ngo-Epreli-1
Thatha indoda yeCancer uye kwiintlanganiso nabahlobo kunye nentsapho yakho. Yeyona nto ayithanda kakhulu. Ulumkile xa ekhetha abahlobo bakhe kwaye akazukubandakanyeka kubudlelwane ukuba akakhululekanga. Yinto eyaziwayo ukuba indoda yomhlaza ngumhlobo ngonaphakade.
Kuya kufuneka uyingqine indoda eyiCancer ukuba uthembekile. Ukuthi nje kunjalo akwanele.
Indoda eyiCancer ifuna ukuqinisekiswa ngalo lonke ixesha kwaye ikhathalelwe ngokufanelekileyo. Cofa kuTwitter
Umqondiso waManzi, indoda enguCancer inomdla xa usegumbini lokulala. Unokumangalisa iqabane lakhe nge-intuition yakhe. Yiyo le nto emenza umthandi olungileyo we-zodiac. Uyayazi indlela yokuvusa kwaye uyayazi indlela yokwenza ukonwaba kwiqabane lakhe.
Akukho kuthandana ngaphandle kothando loMhlaza. Ukuba ufuna ukumlukuhla, ibhafu enamakhandlela kunye neepalasi ezi rose kufuneka zenze iqhinga. Uyakuqaphela ukuba ulungile kwaye uyacingela ngamaxesha onke.
Awunakho ukukhawulezisa indoda eCancer malunga nayiphi na imiba yothando. Uhlala ethatha amanyathelo okhuseleko ukuze angonzakalisi. Umlingane wakhe kufuneka alufanele lonke uhoyo kunye nokuzinikela kwakhe.
Ngokukhawuleza nje ukuba ubudlelwane buneengcambu ezithile, unokumthemba umntu onomhlaza ukuba abe lelona liqabane lilungileyo. Ngenxa yokuba enovakalelo ngokwendalo, angathatha enye yakhe ebalulekileyo kwiindiza ezahlukeneyo zothando, into ekungekho namnye umqondiso kwi-zodiac onokuyenza.
Ezona mpawu zihambelana noMhlaza ziiPisces, iScorpio, iVirgo, kunye neTaurus.
Akululanga ukubona ukuba injani indoda yeCancer, ukusuka kwiintlanganiso zokuqala ezimbalwa. Iimvakalelo zakhe ziyatshintsha ukusuka kumzuzu omnye ukuya komnye, kwaye konke oku kusenzeka ngenxa yeNyanga kunye nezigaba zayo zenyanga.
Oku akubonisi ukuba umntu onomhlaza unobuntu obuphindwe kabini, ngakumbi obuguquguqukayo. Zininzi iimvakalelo kwindoda yeCancer, kwaye zitshintsha kakhulu, zisiza kumaza.
Njengoko enokuhlalutya ngokulula kwaye achonge iimfuno kunye neenjongo zabantu, indoda yeCancer inkulu kwishishini kwaye idibana nabantu ngezivumelwano ezahlukeneyo. Iimpawu ezifanayo ziya kumenza abe yintatheli elungileyo, i-aviator, ugqirha, utitshala, ugqirha wezengqondo kunye negqwetha.
Owona msebenzi ulungileyo womntu onomhlaza iya kuba yinto efuna ukuba asebenze ekhaya kuba uyakuthanda ukuba phakathi kosapho.
Eyona midlalo ilungele indoda ye-aquarius
Usenokuhlala ecinga ngezinye iziphumo ukuba izinto bezinokwenziwa ngokwahlukileyo.
Xa kuziwa kwezemali, uMhlaza uya kuyibeka imali kutyalo-mali lwexesha elide. Wayengafane achithe ngaphandle kokucinga kwaye ngekhe akholelwe kwinto enokumthembisa ngokumfumanela imali ngaphandle kokusebenza nzima.
Indoda yosapho enothando lwee-nibbles
Njengokuba ekuthanda ukutya kakhulu, indoda enomdlavuza kufuneka ilumke imikhwa yayo yokutya. Kuya kufuneka ayilawule imfuno yokutya amashwamshwam kunye neelekese ezahlukeneyo.
Ayisiyiyo kuphela into yokuba anokugqibela ngokuba neengxaki zokutyeba, kodwa unokukhula nokutya.
Inobuhle kwaye yala maxesha, indoda yomhlaza ilondoloze kakhulu xa kufikwa kwikhabhathi yayo. Ukhetha imibala elula kwaye uhlala esebenzisa intuition yakhe ukumisela ukuba yintoni esebenzayo kwintoni. Unobunkunkqele ngakumbi kwaye uncinci we-trendsetter.
Indoda yomhlaza inangaphandle okunzima kwaye ingaphakathi lifudumele. Unje kuba unxiba imaski erhabaxa ukuze angonzakali.
Ungumhlobo othandekayo onentliziyo entle. Uyaluxabisa usapho kwaye ukwinto yakhe xa ekunye nabahlobo.
Ngaba Amadoda Omhlaza Anomona Kwaye Akhona?
Ukuhambelana kwamanani kwe8
Uthini umqondiso we-zodiac kaJanuwari 21
uphawu lwe zodiac ngomatshi 21
Isinese zodiac uphawu ngo-1962
uphawu luni ukuba uzelwe ngojuni
neptune kwindlu yokuqala